Diinyaqaanka Somaliland oo u fadwooday Muuse Biixi: “Halkii aad nagu jihayso dadku waa ku khasbanyahay!” – Radio Daljir
Juunyo 7, 2018 4:46 g 1
Abukar Arman: “Maanta, badi aqoonyahanka iyo caqliyahanka Muslinku waa wada af-maran, waa guulwade, ama dabtuure nooca al-assabiyyah, ahna nooc firqadiisa ama koox-diimeedkiisa u jajaban (Sunni, Shiica, Suufi, IWM.), taageersan fikirkiisa (Xanafi, Maaliki, Shaafici, Xanbeli, Jacfari, IWM.), ama taageersan diin-siyaasadeedkiisa (Salaafi, Ikhwaani, Xuuthi, Islaaxi, IWM.).”
Culimaa’udiinka reer Somaliland ah oo la afuray Madaxweyne Muuse Biixi ayaa taageeray mowqifka duullaanka Somaliland ee gobolka Sool iyo duullaankii ugu danbeeyey ee aagga Tukaraq.
“Annaga oo og oo ka markaati kacayna in la ina soo weeraray, oo lagu soo weeraray, oo ciidankeenii difaaca ku jiro, ood mar walba nabad la taagantahay, oo waliba adiga ay kuu dheertahay, sidaan anigu ogahay, waxaan lagu oran askari buu ahaan jiray … wixii dowladuhu sidii ay ku oran lahaayeen baanu ku oranin oo kuu soo jeedinin,” ayaa kamid ahaa hadaladii diinyaqaanka Somaliland.
Diinyaqaan kale oo reer Somaliland oo asna afurka Madaxweyne Muuse Biixi ka fadwooday ayaa yiri, “dhulkaan la isku hayo beel gaar ah ma leh, Ilaah baa dhulkaan leh, waxaana ka talisa Somaliland … waana kugu garabtaaganahay difaaca qaranimada Somaliland.”
Sida uu kal hore uga faallooday aqoonyahan ahna diblomaasi hore Abukar Arman, badi diinyaqaanka dunida Islaamka ayaa noqday kuwo u fatwooda damaca hadba kan hoggaanka haya.
Abukar oo ka faalloonaya damaca kaligitaliyaha Islaamka ayaa yiri, waxa ay “dallacaan wadaado jilayey wadaadnimada, waxa kaliya ee laga rabeyna ay aheyd in ay fatwoodaan oo ay meelmariyaan quraafaadka hoggaamiye-ku-sheegga kaligitaliyaha ah ee wadaadka jilaaga ah meesha keensaday.”
Colaadda waqooyiga Soomaaliya maanta ma ah mid ku eg gobolka Sool oo kaliya ee waa mid sii fideysa, saas oo ay tahayna dhammaan wadaada u fatwooday Madaxweyne Muuse biixi kuma jiro diinyaqaan ka hadlay xasuuqii dowladda Muuse Biixi ay ka gaysatay deegaanka Ceel Afweyn ee Somaliland, kaas oo xaafado dhan, masaajidadii iyo guryihii qabiil kamid ah qaabaa’ilada Somaliland dhulka lala simay, qaxootina laga dhigey. Sidoo kale, wadaadadu kama ay hadlin collaadda hadda ka hureysa Ceerigaabo, una dhexaysa isla qabaa’ilka Ceel Afweyn, oo midi haysato taageerada dowladda Muuse Biixi.
Hoos ka daawo fatwada diinyaqaanka Somaliland:
Siyaasadda & Dhaqaalaha 476 Wararka 19789
Soocadde: “shacabka Sool meel ay joogaanba ha u diyaargaroobaan soodhoweynta ciidamada Puntland” (dhegayso)
Araweelo 1 year ago
Munaafiqiin aan rabi iyo rasuul aqoon